18-07-25 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
filter ကိုအထည် Filter ကိုအထည်၏အခြေခံအမျိုးအစားစက်ထည်, nonwoven အထည်များနှင့်ပေါင်းစပ်ထည်သို့ခွဲခြားထားတယ်။ ရက်ထည်များ၏အတိုင်နှင့်အဖောက်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းတွေနဲ့စီစဉ်ပေးနိုင်ပါသည်သောကြောင့် 1. ထည်ယက်, ကွဲပြားခြားနားသောရက်ဖွဲ့စည်းပုံမှာကိန်းဂဏန်းများရယူနိုင်ပြီးပေါင်းသူတို့ကွဲပြားခြားနားသောရှိပါသည်သုံးနိုင်တယ် ...
ခါးပတ် filter ကိုစာနယ်ဇင်းရွှံ့အပြေးအဘို့အကြောင်းပြချက်
ပို. ပို. ကုမ္ပဏီများခါးပတ် type ကို filter ကိုစာနယ်ဇင်းအသုံးပြုနေသည်, filter ကိုအထည်များ၏အမှန်တကယ်အသုံးပြုမှုအတွက်, ဖောက်သည်များမကြာခဏခါးပတ် type ကို filter ကိုစာနယ်ဇင်းရွှံ့နွံစစ်ထုတ်အထည်ရောင်ပြန်ဟပ်စပိုင်းတွင်မကြာခဏ unceasing နှင့်အတူ, ထို့နောက်သတိထားပြီးနောက်က filter ကိုအထည်များ၏အရည်အသွေးထင် အကျဉ်းချုပ်ကျနော်တို့အကြောင်းရင်းအကျဉ်းချုပ် ...
ခါးပတ် filter ကိုအထည်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်လျှောက်လွှာ
Filtration တစ်ဦးပစ္စည်းဥစ္စာထဲကပစ္စည်းဥစ္စာခွဲထုတ်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်သုံးမျိုးခွဲခြားထားတယ်: ဓာတ်ငွေ့-အစိုင်အခဲ, အရည်-အစိုင်အခဲများနှင့်အစိုင်အခဲ-အစိုင်အခဲ Separation, အများဆုံးကျယ်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့ filter ကိုစာနယ်ဇင်းနှင့် filter ကို၏ပေါင်းစပ်မှတဆင့်ပြည့်စုံသောအရည်-အစိုင်အခဲခွဲခြာဖြစ်ပါတယ် ...